Degso APK loogu talagalay Android
Codsiga ExpressVPN wuxuu ka mid yahay codsiyada VPN ee ay daalacan karaan kuwa doonaya inay marin u helaan internet aan xad lahayn oo aamin ah iyagoo adeegsanaya taleefannadooda casriga ah ee Android iyo kiniiniyada. In kasta oo ay bixiso adeeg bilaash ah hal maalin oo keliya, ka dib muddo hal maalin ah, waxaad ku iibsan kartaa 30...
Beeraha Beeraha 18 waa jilitaanka ugu wanaagsan ee beeraha ee aad ku ciyaari karto taleefankaaga Android. Simulator -ka cusub ee Beeraha, oo lagu garto garaafyadiisa fiiqan, ciyaarta dhabta ah iyo nuxurka ka mid ah cayaaraha jilitaanka beerta ee moobiilka mobilada, waxaan aragnaa in tirada dalagyada aan soo ururin karno oo aan goosan...
Truck Simulator 2018: Yurub, waxsoosaarka gudaha, gabi ahaanba af Turki, kaliya maahan Android; Ciyaarta jilitaanka ugu fiican ee madal mobilada. Baabuurta korontada ee jiilka cusub ayaa ugu fiican ciyaaraha xamuulka ee guur guura oo leh taraafikada dhabta ah, cimilada dhabta ah, waddooyin kala duwan, khariidado faahfaahsan iyo astaamo...
Simulator Trash Truck Simulator waa jilitaan baabuur oo aad ku ciyaari karto aaladahaaga mobilada oo leh nidaamka hawlgalka Android. Waxaad ku tusaysaa xirfadahaaga wadista ciyaarta halkaas oo aad isku daydo inaad hore ugu socoto bartamaha magaalada iyo waddooyinka cidhiidhiga ah. Simulator Trash Truck Simulator, jilid baabuur wadista...
Taxi Simulator 2018 waa ciyaarta jilitaanka taksi ee ugu fiican oo aad ka soo dejisan karto kuna ciyaari karto taleefankaaga Android lacag laaan. Soosaarka, oo ka sarreeya ciyaaraha kale ee jilitaanka taksi ahaan xagga sawirrada iyo ciyaarta ciyaarta, waxaa soo saaray Ciyaaraha Zuuks, oo aan ku naqaanno Truck Simulator 2017 iyo Ciyaaraha...
Darawalnimada Simulator -ka 3D waa ciyaar aan laga maarmi karin kuwa doonaya inay bartaan wadista baabuurka. Waad ku mahadsan tahay Simulator Academy Driving 3D, oo aad si bilaash ah uga soo dejisan karto mashiinka Android, waxaad baran kartaa sida baabuurka loogu kaxeeyo magaalada iyo taraafikada culus. Qof walba wuxuu rabaa inuu...
Simulator-ka Dhismaha 2 waa jilid dhisme oo aad ku raaxeysan karto ciyaarta haddii aad rabto inaad isticmaasho mashiinno kala duwan oo culus sida kuwa qodda iyo kuwa wax qasa. In Simulator Construction 2, ciyaar jilitaan ah oo aad ku ciyaari karto taleefannadaada casriga ah iyo kiniiniyada adiga oo adeegsanaya nidaamka hawlgalka...
Baska Baska: Ultimate waa ciyaar jilid bas ah oo aad kala soo bixi karto oo bilaash uga ciyaari karto taleefankaaga Android. Ciyaarta Baska Basaska, oo ka socota sameeyayaasha Truck Simulator 2018 ciyaarta Europe, waxay ku siinaysaa khibrada basaska ku kaxeeya magaalooyinka. Waxaan kugula talinayaa hadaad raadineyso jilitaanka baska. Waa...
Waxaad dib u cusboonaysiineysaa beertaada adoo xallinaya xujooyinka adag ee ciyaarta jaceylka jaceyl ee Merge Manor: Sunny House. Isku -darka Manor: Guriga Sunny Download Ka caawi Sunny inay dib ugu soo celiso beertii ayeeyadeed sharafteedii hore iyo ubaxyo u dhigma si ay horumar u gaarto. Ku dhex gal sheekada jaceylka jaceylka ah oo ay...
Diyaar u noqo inaad la kulanto khibrad wadid dhab ah Bus Simulator 3D, kaas oo u muuqda inuu yahay ciyaar xiiso leh oo ay ku raaxaysan doonaan adeegsadayaasha jecel cayaaraha jilitaanka. Ciyaarta ku dareensiineysa inaad ku socotid taraafikada, qeybaha kala duwan ee gaarigaaga ayaa waxyeello soo gaarto haddii aad shil gasho. Waa xaqiiqo...
Simulator-ka xatooyada magaaladu waa ciyaar gacmeed u eg GTA oo aad ku raaxaysan karto ciyaarista haddii aad rabto inaad waqtigaaga firaaqada ku qaadato ciyaar ficil ka buuxdo. Waxaan isku dayeynaa inaan ku dhisno boqortooyadeena dambiyada ee ku jira jilitaanka tuugada Magaalada, oo ah ciyaar ficil ku saleysan adduun oo furan oo aad ka...
Minibus Simulator 2017 waa ciyaar bas yar oo laga yaabo inaad jeceshahay haddii aad rabto inaad la kulanto khibrad wadisnimo oo macquul ah aaladahaaga mobilada. Waxaan isku dayeynaa inaan lacag ku helno annagoo adeegsanayna xirfadahayaga wadista ee Minibus Simulator 2017, oo ah ciyaar minibus ah oo aad ka soo dejisan karto oo aad...
HappyMod waa codsi qaab mod ah oo lagu rakibi karo taleefannada Android sida APK. HappyMod waa codsi aad ka soo dejisan karto 100% mods ka shaqeynaya ciyaaraha caanka ah ee Android sida Kuwa naga mid ah, Brawl Stars, Minecraft, Roblox. Noocyada ciyaarta ka sokow, barnaamijka HappyMod wuxuu kaloo bixiyaa noocyo ka mid ah barnaamijyada...
Simulator Driving Car Ultimate waa ciyaar jilitaan wadista baabuurka oo leh sawirrada ugu fiican oo keliya maahan Android, laakiin sidoo kale mobilada. Waxaad si xor ah ugu dhex mushaaxi kartaa magaalada sida ciyaarta tartanka loo baahan yahay ee Speed, oo waad ka qaybgeli kartaa tartamada haddii aad rabto. Simulator -ka baabuur -wadista...
Transcriber waa codsi bilaash ah oo Android ah oo aad u adeegsan karto inaad ku duubto farriimaha codka WhatsApp/duubista codka ee lagula wadaago. Haddii dhegeysiga wada sheekaysiga daqiiqado-dheer ah ee saaxiibbadaada ama qoyskaaga ee WhatsApp uu yahay mid daallan, waa inaad isku daydaa codsiga Transcriber, kaasoo awood u leh inuu u...
Tactical Battle Simulator, oo loo qaabeeyey si ka duwan ciyaaraha caadiga ah ee dagaalka, ayaa soo jiita dareenka sida ciyaar jilitaan oo gaar ah. Dagaal goos goos ah oo lagu qorsheeyey xeelado xeeladeed ayaa ku sugaya. Ciyaartan, oo ay ku jiraan 80 unug oo kala duwan guud ahaan, waxaad ku bilaabi kartaa dagaalka adoo dooranaya...
Flightradar24, codsiga raadinta duulimaadka ugu caansan adduunka; #1 dalabka safarka ee 150 dal. U rog taleefankaaga Android ama kiniiniga raadiyaha diyaaradda tooska ah oo arag duulimaadyada adduunka oo dhaqaaqa waqtiga dhabta ah khariidad faahfaahsan. Ama u tilmaan aaladdaada diyaarad si aad u ogaato meesha ay u socoto iyo nooca...
Zemana Antivirus waa codsi antivirus horumarsan oo loogu talagalay dadka isticmaala taleefanka Android. Waxaad ku soo dejisan kartaa nuqulkii ugu dambeeyay ee Zemana Antivirus 2021, xannibaadda basaasnimada iyo codsiga amniga internetka, taleefankaaga casriga ah adoo adeegsanaya Softmedal, waxaadna ka ilaalin kartaa aaladdaada moobilka...
Boqortooyada Burcad -badeedda waa ciyaar jilitaan mowduuc oo rpg ah. Tababar maraakiibtaada budhcad -badeedda ee geesiyaasha adduunka oo bilaw Safarkii Mucjisada ahaa ee Conquest! Download Boqortooyada Burcadbadeeda Ku soo biimow bad -maaxida badda dhexdeeda, ku quuso badweynta dahsoon, dhis dhulal awood leh oo sahamiya jasiiradaha aan...
Ciyaartaan, waxaad markhaati ka noqon doontaa iimaan -darrada dhacda marka aad qabato shaqo beer. La wareeg beertaada iyo beeraheeda. Ku beero abuurka beerta, u isticmaal qalab si aad u kala firdhiso abuurka, waraabiso dalagyada beeraha. Cagaf ku kaxee si ay u goostaan, u ururiyaan oo u qaadaan carrada. Si aad hawshan oo dhan u qabato...
Farmville 3 waa ciyaar jilitaan lacag laaan ah oo aad ku ciyaari karto aaladahaaga caqliga leh ee leh nidaamka hawlgalka Android. Farmville, oo mar ahaan jirtay ciyaarta beerta halyeeyga ah, ayaa halkan kula jirta ciyaarta cusub ee taxanaha waqti dheer kadib. Waxaad ku qaadan kartaa waqti aad u fiican ciyaarta, taas oo ka dhex muuqata...
Eebaha siddooyinkii: Rise to War waa ciyaarta mobilada ee rasmiga ah ee taxanaha Lord of Rings, oo ay soo saareen Ciyaaraha Netease. Download Eebbe siddooyinkii: u kac dagaalka Sheekooyinka xiisaha leh ee dadkii hore, ha ahaadeen jacayl, saaxiibtinimo ama sharaf, waa wax la soo dhaafay. Dagaal cusub oo giraanta ah ayaa qarka u saaran,...
Dib-u-Celinta NieR waa ciyaar-door-ciyaar-ciyaar loogu talagalay aaladaha mobilada ee ay soo saareen Square Enix iyo Applibot. Soo dejiso NieR Reincarnation Ciyaarta ugu cusub ee taxanaha NieR ayaa ku soo socota mobilada! Sheekadu waxay ka dhacdaa meel la yiraahdo The Cage. Gabar ayaa ka soo toosaysa sagxad dhagax oo qabow. Wuxuu isku...
Wicitaanka Beddelka Wicitaanka waa mid ka mid ah codsiyada beddelaya codka oo loo adeegsan karo taleefannada Android iyo kiniiniyada. Codsigan, oo ku habboon u -haynta saaxiibbadaa ama xubnaha qoyskaaga, ayaa kuu oggolaanaya inaad ku dhejiso saamaynta dhawaaqa wicitaannadaas intaad ku jirto wicitaan taleefan si ay u maqlaan...
Codsiga moobilka ee HealthPass waa arjiga baasaboorka caafimaadka oo ay Wasaaradda Caafimaadka u diyaarisay muwaadiniinta Jamhuuriyadda Turkiga. Adigoo adeegsanaya dalabka taleefanka gacanta ee HealthPass, oo aad si bilaash ah uga soo dejisan karto taleefankaaga Android, waxaad ku ilaalin kartaa tallaalkaaga Covid-19, baaritaanka...
TapTap (APK) waa dukaanka app -ka Shiinaha oo aad u adeegsan karto beddelka Google Play Store. Waxaad soo dejisan kartaa ciyaaro qurux badan oo Android ah sida PUBG, oo aan laga heli karin Dukaanka Google Play, adigoo adeegsanaya arjigan oo ciyaaraya adigoon sugin. Dhinaca Android, waxaa jira daraasiin dukaanno iyo ikhtiyaarro APK ah oo...
Zombieland: Badbaadinta AFK waa ciyaar guur-ku-saleysan oo aad ku hormariso adigoo qarxinaya maskaxda zombie. Soo dejiso Zombieland: Badbaadinta AFK Wadada ku dhufo oo ku biir xiisaha ay u burburinayaan zombies kuwa badbaaday. Noqo geesiyaal markaad qorto geesiyaal oo aad maamusho kooxdaada ciyaarta toogashada zombie -ga ah. Ciyaartan...
Top Eleven 2021, ciyaartii abaalmarinta ku guuleysatay ee maamulaha kubada cagta. Laga soo bilaabo heshiis la sameynta koox xiddig leh ilaa aad dhisato garoon aad iska leedahay, wax kasta oo ka mid ah Top Eleven waxay kuxirantahay sharciyadaada naaddiguna waa kooxdaada! Waxaad wajihi doontaa maamulayaasha kubada cagta adduunka oo dhan...
GBWhatsapp (APK) waa barnaamij bilaash ah oo bixiya astaamo uusan app -ka isgaarsiinta WhatsApp, kaas oo beddelaya SMS, uusan samayn. Waxay leedahay dhammaan astaamaha aan dooneyno inaan ku aragno dalabka rasmiga ah ee WhatsApp, sida adeegsiga koontooyin badan oo WhatsApp ah isla taleefanka, xiritaanka taariikhdii ugu dambeysay ee la...
Boqortooyada: Ballanqaadka Dhiiggu waa midka ugu naxariis-darran adduunka furan ee MMORPG-ga hal-hal-hal ah. Ku soo biir heshiiskan dhiigga oo aad la dagaallanto ciyaartoy ka socota 150 dal oo adduunka ah! Download Boqortooyada: Ballanqaadka Dhiigga Boqortooyada: Ballanqaadka Dhiigga waxaa loogu talagalay cayaartoy adag oo dhab ah...
Adduun dhab ah ayaa nagu sugaya Super Simulator 3D Driving Bus Simulator 3D, oo ay soo saartay Games2win. Iyada oo leh Super Driver Bus Driving Simulator 3D, oo ka mid ah ciyaaraha orodka mobilada, waxaan ka soo ururin doonaa ciyaartoyda joogsiyada waxaanan isku dayi doonnaa inaan gaarsiino dugsiyadooda. Soosaarka, oo ay ku jiraan...
PUBG: Gobolka Cusub waa nooca cusub ee royale dagaal ee loogu talagalay kuwa sugaya PUBG Mobile 2. Ciyaarta royale game PUBG Mobile, oo jabisay diiwaanka soo dejinta ee barnaamijyada mobilada ee Android iyo iOS, ayaa lagu soo bandhigay magaca PUBG New State halkii laga isticmaali lahaa PUBG Mobile 2. Moobilka cusub ee PUBG ee PUBG:...
Quibi waa barnaamij la mid ah Netflix, oo ah madal daawashada filimka-TV-documentary-ka caanka ah. Loogu talagalay kaliya dadka isticmaala moobiilka oo laga heli karo taleefanka, dalabku wuxuu bixiyaa taxane TV oo tayo leh. Si ka duwan aaladaha kale ee qulqulka fiidiyowga, oo ay ku jiraan Netflix, waxa ku jira waa 10 daqiiqo ama ka yar. ...
FOXplay waa nooc madal ah oo aad ka daawan karto filimada iyo taxanaha intarneedka, halkaas oo kaliya waxa ku jira FOX TV ay ku jirto marxaladda koowaad oo la qorsheeyay in lagu martiqaado waxyaabo kale mustaqbalka. Codsiga cusub waxaa soo bandhigay Fox sida soo socota: Codsigeena Android waa la cusboonaysiiyay! Codsigeenna la...
Türk Telekom Pokus waa codsi jeebka dhijitaalka ah oo aad lacag kaga bixin karto dukaamaysiga ilaa cayaaraha, cuntada ilaa madadaalada, lacag uga dir cinwaanka qofkasta oo aad rabto, lacagna ku wareejiso 24/7. Soo dejiso arjiga Pokus oo bilow inaad ku raaxeysato faaiidooyinka Pokus isla markiiba. Turk Telekom Pokus Download Uma baahnid...
Retro Goal waa ciyaar kubbadda cagta ah oo ay ku raaxeysan doonaan jiilka ku raaxeysta ciyaarista ciyaaraha arcade. Laga soo bilaabo horumariyeyaasha cayaaraha caanka ah ee caanka ah ee New Star Soccer iyo Retro Bowl, waa isku-darka cayaaraha kubbadda cagta ee xawaaraha sare iyo xiisaha leh iyo maaraynta koox fudud. Ku ciyaar 10-ka kulan...
Maraakiibta Dagaal ee Casriga ah waa ciyaar Android ah oo aad ku amreyso markabkaaga dagaalka dagaallada badda ee tooska ah ee internetka. Soo Degso Maraakiibta Dagaalka ee Casriga ah Android Maraakiibta dagaal ee ugu awooda badan ayaa ku sugaya! Dagaal kula asxaabtaada ciyaarta dhabta ah ee waxqabadka khadka tooska ah ee Maraakiibta...
Dream League Soccer wuxuu ka mid yahay kuwa ugu badan ee la soo dejiyo oo lagu ciyaaro kubbadda cagta moobiilka. Dream League Soccer waa mid ka mid ah ciyaaraha kubbadda cagta ee mobilada oo la cusbooneysiiyay marka xilli -ciyaareedka cusub furmo. Sidaa darteed, Dream League Soccer 2019 waxaa lagu soo dejisan karaa taleefannada Android...
Ku bood gawaarida leh awood iyo xirmooyin kala duwan, oo ay ku jiraan moodooyinka Brazil, Yurub iyo Ameerika, oo ku habeyn sawirka aad ugu jeceshahay gawaarida xamuulka, isjiidka iyo darawalada. Hakinta qolka, dhaq -dhaqaaqyada tuulooyinka, dhaqdhaqaaqyada anteenooyinku way kala duwanaan karaan iyadoo loo eegayo nooca dhulka. Ka dhig...
Markabka Shanaad waa ficil rpg toogte ah oo lagu dejiyay mugdi, adduunyo-apocalyptik Cudurkii zombie ee degdega ahaa wuxuu kufiday adduunka wuxuuna baabiiyay ilbaxnimo badan. Kuwa yar ee ka badbaaday Maalinta Qiyaame waxay abaabulaan inay la dagaallamaan kooxo badan oo zombies ah iyo dib u dhiska bulshada. Adiga oo ah taliyaha ciidanka...
Witcher: Monster Slayer waa ciyaarta dhabta ah ee goobta lagu kordhiyay ee Spokko, qayb ka mid ah qoyska CD PROJEKT. Waxaad qaadataa doorka ugaarsade xirfad-yaqaan ah oo ku jira xaqiiqda la kordhiyay (AR) ciyaarta doorka-ciyaarista (RPG). Download Deg Deg Witcher: Bahal Monster Witcher: Monster Slayer waa ciyaar ugaarsi bahal ugaarsi ah...
Carling Dev, oo ka mid ah magacyada guulaha leh ee moobilka guurguura, ayaa nagu dhiirrigelinaya inaan la barbar -dhigno Wingsuit Simulator, oo ay lacag laaan ku daabacdo. Ciyaarta, oo ay ku jiraan 5 dharka kala duwan, waxay leedahay garaafyo tayo sare leh iyo saamayn dhawaaq. Iyada oo leh Wingsuit Simulator, oo ka mid ah ciyaaraha...
WhatsApp Plus APK waa koronto loo isticmaalo taleefannada Android oo ku daraya astaamo dheeraad ah barnaamijka WhatsApp. WhatsApp Plus kuma xirna Facebook, waa qaab dhinac saddexaad ah. Codsiyada aan rasmiga ahayn ee WhatsApp waxay sababi karaan nuglaanta amniga. Intaad soo dejineyso oo aad isticmaaleyso, masuuliyadda waxaa iska leh...
Crossfire: Badbaadinta Zombie Shooter waa ciyaar jilbaha zombie gaar u ah barnaamijka Android. Bixinta gameplay qof-shaqsiyeedka koowaad, ciyaarta RPG iyo MMO waa tan ugu fiican nooceeda oo leh shaxanka tayada konsole, fiisigiska dareeraha iyo kontaroolada wanaagsan. Crossfire: Badbaadinta Zombie Shooter waa bilaash in laga soo dejiyo...
Mario Kart Tour ayaa soo jiita dareenka sida ciyaar cusub oo ficil moobiil ah oo aad ku ciyaari karto aaladahaaga moobiilka ee nidaamka hawlgalka Android. Mario Kart Tour, ciyaarta ugu cusub ee mobilada taxanaha Super Mario, waa ciyaar aad ugu tartami karto qeybaha kala duwan ee adduunka, aad ku soo bandhigi karto xirfadahaaga isla...
APKPure wuxuu kamid yahay boggaga ugu wanaagsan ee soo degsado APK. Codsiga Android APK waa mid ka mid ah boggaga la isku halleyn karo ee bixiya xiriiriyeyaasha ciyaarta ee ciyaarta ee Android game oo sidoo kale waxaa jira codsi moobiil ah. Iyadoo APKPure (APK Downloader) waxaad si badbaado leh ugala soo bixi kartaa barnaamijyada iyo...
Zarta waa ciyaar kedis ah oo Turki ah oo aad la ciyaari karto asxaabtaada ama dadka aad la kulmi doonto. Marka laga reebo qaybaha la yaqaan sida dhaqanka guud, taariikhda, juqraafiga iyo suugaanta, waxay kaga duwan tahay cayaaraha kale ee kediska iyada oo awood u leh diyaarinta jawaabaha khiyaanada, sidoo kale waxay leedahay qaybo kala...
Dunida Wanaagsan: Kacaanku waa MMORPG weyn oo leh sawirro 3D oo yaab leh oo bixiya ciyaar ciyaar toosan. Iyada oo leh qaab-dhismeedka cusub ee toosan, ciyaartu waxay haysaa waxyaabihii caadiga ahaa ee Ereygii ugu Fiicanaa, halka aad ku beddeleyso xakameynta labada gacmood oo kuu oggolaaneysa inaad si fudud gacanta ugu ciyaarto ciyaarta....